Kulankii Golaha Dowlada Hoose kadib, dadka degan xaafada Hasanpaşa ayaa mudaharaaday xubnihii MHP ee ka gaabsaday codaynta mooshinka, iyaga oo dalbanaya in la joojiyo mashruuca wadada. Sida laga soo xigtay Netgaste, CHP ee kulanka Golaha Magaalada Sapanca maanta [More ...]
Ololaha Saxiixa Burinta Sapanca Cable Car project ayaa laga bilaabay
Kuwa ka soo horjeedda booska degmada Hasanpaşa ee Kırkpınar, Sapanca waxay olole codsi ah ka bilaabeen internetka. Mashruuca Teleferik, oo ku mashquulsan ajandeheenna gobolka ee muddooyinkii ugu dambeeyay, ayaa wali ku sii jiraya diirimaadkiisa ajandaha. Waxa loo qorsheeyay ik [More ...]
Sarkaalka shirkadda ayaa booqday CHP isagoo dhaleeceeyay mashruucan oo wuxuu sharraxay xaaladi ugu dambeysay. Özgümmüş, sarkaalka Bursa Teleferik, oo qabtey dhismaha mashruuca xargaha ee Kırkpınarlılar uu ka soo horjeestay idaacadda, ayaa yiri, asaasa xitaa haddii goobta mashruucu ka ciyaarayo mitirrada 1 [More ...]
Mashruuca gaadiidka telefishinka ee laga fulinayo Sapanca wuxuu gacan ka geysan doonaa dalxiiska
Duqa Magaalada Sapanca Assoc. Dr. Aydın Yılmazer wuxuu sharraxaad ka bixiyey mashruuca gawaarida fiilada ee laga heli karo degmada. Yılmazer wuxuu sheegay inay diyaarinayaan mashruuc ku habboon dabeecadda, Yılmazer wuxuu sheegay inay qorsheynayaan dhammaan faahfaahinta si saldhigyada gawaarida fiilooyinka aysan u keenin wax saameyn xun deegaanka. [More ...]